Faah Faahin Dheeraad ah Markabkii Dalka Ruushka ee la qafaashay | maakhir.com
Faah Faahin Dheeraad ah Markabkii Dalka Ruushka ee la qafaashay
February 3, 2008 in Somalia
Ayl:- War Deg Deg ah oo haatan ku soo dhacay war qabadka Shabakada Maakhir.com ayaa sheegaya in Budhacadii Afduubtay Marka Dalka Ruushka ay la soo Galeen Xeebta Degamada AYl ee Gobolka Nugaal,waxa la soo sheegaya inay markabkaasi wataan Ilaa 14- Shaqaale ah kuwaasi oo u kala dhashay Dalalka Britain iyo Ruushka.
Markabkan oo ah Markab wayn isla markaan siday Badeecad oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa xeebaha Soomaaliya waxaa lagu qafaashey 48 saac ka hor, waxaana haatan lagu hayaa xeebta degmada Eyl iyadoo kooxo hubaysan ay afduub u haystaan, mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay dhanka Budhcadaasi.
Gudoomiyaha degmada Eyl C/laahi Siicid Aw-Yuusuf oo aan xiriir telefoon la sameynay ayaa inoo xaqiijiyey in Markabka la soo afduubtey la keenay xaley saqdiii dhexe degmada Eyl, waxana uu sheegay inay wataan Budhcad Reer Puntland ah oo deegaanka AYl u dhashay kuwaasi oo aad u hubaysan.
C/laahi Siciid waxa uu kaloo sheegay inay la sameeyeen xidhiidh Budhcadaasi balse ay deedeen inay wax wada hadal ah la galaan Maamulka Degmada AYl iyo waliba odayaal dhaqameedka Deegaanka.
Gudoomiyaha Degamada Ayl ee Gobolka Nugaal ayaa sheegay inay jiraan Dadaalo dheeraad ah oo ay siwada jir ah u wadaan Wax garadka Deegaanka iyo Maamulka Degamada Ayl kuwaasi oo xusul duub ugu jira sidii ay u soo dayn lahaayeen Markabkaasi.
Deegaanka Ayl ee ka tirsan Gobolka Nugaal ayaa waxa horay u joogay marakab Afduub loogu haystay kaasi oo ilaa haatan ay Gacantooda ku jiro Budhcadii Qafaaltay.
« Axmed Diiriye oo Beeniyay Eedayn loo soo Jeediyay dhawaan
Cade Muuse ayaa la sheegay inuu bari u duulayo Dalka Itoobiya »